सुनको भाउ बुधबार ह्वात्तै बढ्यो, प्रतितोला कति पुग्यो ? Bizshala -
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ बुधबार एकैदिन तोलामा रु. ८०० ले बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार तोलामा रु. ८०० ले बढेर प्रतितोला छापावाल सुन रु. ७२ हजार २०० र तेजाबी सुन रु. ७१ हजार ९०० कायम भएको छ । यो मंसिर महिना लागेयताकै उच्च मूल्य हो ।
मंसिरको ४ गते छापावाल सुन प्रतितोला रु. ७२ हजार १०० र तेजाबी सुन रु. ७१ हजार ८०० मा कारोबार भएको थियो । त्यसयता सुनको भाउ लगातार घट्ने र बढ्ने क्रम जारी छ ।
उता चाँदीको भाउ पनि बुधबार तोलामै १५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला रु. ८६५ कायम भएको छ । कारोबारको पहिलो दिन आइतबार प्रतितोला रु. ८५५ रहेको चाँदीको भाउ सोमबार र मंगलबार भने रु. ५ घटेर रु.८५० मा कारोबार भएको थियो ।